Thursday August 12, 2021 - 19:35:02 in Wararka by Super Admin
Waagacusub.com - Aqalka sarre Puntland waxba kama duwana liis gole wasiir uu deni soo magacaabay oo ay golaha baarlamaankanna codka kalsoonida siiyeen. Tani waa calaamada bilowga ku danaysiga shakhsi ee awooda dowlad goboleedka Puntland, way iska m
Waagacusub.com - Aqalka sarre Puntland waxba kama duwana liis gole wasiir uu deni soo magacaabay oo ay golaha baarlamaankanna codka kalsoonida siiyeen. Tani waa calaamada bilowga ku danaysiga shakhsi ee awooda dowlad goboleedka Puntland, way iska muuqataa in koox deni danihiisa gaarka u fulinaya inuu soo xushay, laakiin aanu soo xulin xubno si caddalad ah ugu tartama aqalka sarre.
Xligii Abdiweli gaas ayaa dad badan aaminsan yihiin in aqalka sarre Puntland si adag loogu loolamay oo hal iyo laba cod lagu kala guuleystay.
Deni wuxuu furay albaabka eexda, nin tooxsiga iyo musuqmaasuqa xilalka aqalka sarre Puntland ku meteli doona afarta sanno ee soo socota. Fagaaraha golaha baarlamaanka Puntland waxaa ka dhacay malxiis siyaasadeed oo xubno aan han siyaasadeed laheyn kursi walba lagu hoos qoray, intooda badan wayba isku hor casileen intaan cod la gelin tartamayaasha aqalka sarre Puntland.
Haddaba, aqalka sarre waa awood si gaar ah loo siiyey in ay ku soo magacabaan tartamayasha danaynaya aqalka sarre, balse waxay doodi ka joogta aqalka hoose oo beelaha odayaashooda iyo dhaqanka ugu sarreeya soo xuli jiray in damac weyn deni kaga jiro ergo wada dowladda soo qor qoratay inuu ka dhigo oo xubno liis dheer ugu qoran soo wada saaro, taasina waa mid halis ku ah damaca deni dhamaan beelaha Puntland, haddii ay damacaas u hirgalo Saciid deni ku doonayo inuu liiska dheer ee u qoran ku soo xusho xubno xildhibaano isaga soo wada qortay dhamaan ergooyinka dooran doona.